Muxuu Salka ku hayaa Khilaafka Aderbijaan iyo Armiiniya? – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Muxuu Salka ku hayaa Khilaafka Aderbijaan iyo Armiiniya?
On Sep 28, 2020 178 0
Xiisada ka dhex taagan wadamada Aderbijaan iyo Armiiniya ayaa cirka isku sii shareereysa, iyadoona labada dhinac ay ku goodinayaan iney sii wadi doonaan dagaalka tan iyo inta ay ka helayaan waxay iaygu xaqqa u leeyihiin, sida ay hadalka u dhigeen.
Madaxweynaha wadanka Aderbijaan ayaa shaaca ka qaaday in wadankiisa uu diyaar u yahay inuu iska difaaco weerarka kaga imaanaya ciidamada Armiiniyiinta, oo taageero siinaya kooxo gooni u goosad ah oo ka arrimiya gobolka Nagorno Karibakh, diidanna iney hoos tagaan dalka Aderbijaan.
Baarlamaanka wadanka oo fadhi deg deg ah isugu yimid ayaa shaaca ka qaaday in dalka uu xaalad dagaal ku jiro, loona baahanayahy in ciidamada keydka ay diyaar garow kama dambeys ah galaan, si ay uga qeyb qaataan dagaal kasta oo dhaca.
Dhinaca dowladdda Armiiniya, waxay ku eedeysay dalka ay deriska yihiin inuu horar ku yahay jiritaankeeda, islamarkaana uu doonayo inuu awood ugu darsado dhul aanu isagu lahayn, waxayna xukuumadda Armiiniya sheegtay iney is difaaci doonto.
Kudhawaad 20 askari oo katirsan cidamada Armiiniyah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dagaallo dhexmaray labada dhinac, waxaana jira tobanaan dad shacab ah oo sidoo kale dhintay, dagaalkuna weli waa mid socda.
Dowladaha dirirtu ka dhexeyso ayaa helaya taageero uga imaaneysa dhinacyo kala duwan, waxaana Aderbijaan ay taageero ka heleysaa dowladda Turkiga, oo marka loo eego dhanka luuqadda iyo qowmiyaduba is xigaan, halka dowladda Armiiniya ay taageero ka heleyso dowladaha Ruushka iyo Iiraan.
Khubarada ka faallooda arimaha Siyaasadda ayaa sheegaya in sababaha keenay in dowladda Iiraan ay taageerto Armaniyiinta ay tahay iyadoo dowladda Aderbijaan ay la safantahay dowladda Turkiga, halka gaaska wadankaas uu ka qeyb qaadanao in Turkidu ay kala duwaan wax soo saarkooda gaaska ah.
Waxaa sidoo kale afar meelood hal meel shacabka ku nool Iiraan lagu tilmaamaa iney asal ahaan kasoo jeedaan Aderbijaan, sidaas darteed waxay Iiraan ka carareysaa iney taageerto Aderbijaan, maadaama ay keeni karto iney isku xirmaan shacabka Aderbijaan iyo jaaliyadda ku dhaqan wadanka Iiraan ee asal ahaan kasoo jeeda wadankaas.
Marka laga hadlo sababaha keenaya in dowladda Ruushka ay taageerto Armaniyiinta waxay Aqoonyahannadu tilmaamayaan in Armiiniya ay heysato madhabka xagjirka ah ee Orthodoxiska oo qeyb ka ah Nasaarada, iyadoo dhanka kale aaminsan in haddii Armiiniya ay xaaladeeda qal qal uu ku yimaado ay keeni karto inuu isbedel ku yimaado wadanka Qowqaaz ee ay dusha sare ka heysato dowladda Ruushka.
Turkidana, waxay u taageerayaan Aderbijaan iyagoo ka leh dano dhaqaale oo salka ku haya arimaha gaaska, waxaana dowladda Turkiga ay u hanqal taageysaa iney gaarto isku filnaansho xagga Naftada ah, taas oo keeni karta iney u baaqdaan dhaqaale badan oo uga baxa shidaalka.
Marka la isku soo wada duubo, waxay dagaalka ka dhexeeya wadamada Aderbijaan iyo Armiiniya uu noqonayaa dagaal u dhexeeya laba dowladood oo deris ah, waxaana Armiiniyah ay horar ku tahay wadanka Aderbijaan, iyadoo dooneysa iney kala qeybiso, maadaama dadka halkaas ku nool ay yihiin dad Muslimiin ah.